ORINASA IRAY ENY AMPANGABE – RN7 : Mitaraina amin’ny loto sy aretina aterany ny mponina
Mitohy hatrany ankehitriny ny fahazahoana fitarainana avy amin’ny mponina eny amin’ny manodidina momba ny orinasa iray eny Ampangabe Atsimondrano, manakaiky ny toerana misy ny Analamanga Park iny. 20 août 2019
Mitaraina mahakasika ny setroka mahatonga ny loto sy aretina maro ireo mponina, izay efa an-taonany maro kanefa tsy mbola misy fiovany izany fa vao mainka aza nanimba zavatra be dia be. Tsy andro, tsy alina fa dia miaina anaty setroka mipololotra ny rehetra. Mitombo isa vokatr’izay ireo olona marary tratra, ankoatra izay dia mitaraina ihany koa izy ireo fa maloto ny rano noho ny fiparitahan’ny fakon’ny orinasa eny amin’ny manodidina, ary tato ho ato no tena tsapa, hoy izy ireo, fa miha mahazo vahana ny aretin’ny taovam-pisefoana, ireo zaza madinika sy ny zokiolona eny an-toerana no tena lasibatra.
Vokany, manomboka misy fiantraikany amin’ny asa fivelomanay mpivarotra sy mpanao asa tanana ny zava-misy, hoy ny mpivarotra eo ambanin’ny tetezan’ny lalamby mandika ny lalam-pirenena faha7, satria mihena ny hery hiasana noho ny aretin-tratra, ny mpanjifa ihany koa misalasala ny hijanona hividy noho ny loton’ny tontolo iainana. Raha ny loharanom-baovao voaray teny an-toerana hatrany aza dia misy mpiasa tao amin’io orinasa io niala an-daharana satria tsy nahazaka ny hamafin’ny asa.
Eo indrindra no mampanontany tena ny rehetra ny amin’ny hoe nisy fanadihadiana ara-dalàna ve natao mialohan’ny fisokafan’ity orinasa ity. Raha tsiahivina ihany koa ny zava-nitranga dia vao tsy ela akory izay no nisy teratany vahiny namoy ny ainy tao raha voalaza fa maty nilatsahan’ny filan’ny Jirama teny an-toerana. Vaky saina tanteraka manoloana ny zava-misy ny mponina amin’izao fotoana izao ary maniry ny mbola hanaovan’ny fitondram-panjakana fitsirihana satria dia simba tanteraka ny tontolo iainana eny amin’ny manodidina.
Nogadraina vonjimaika ilay ramatoabe nampijaly ny zafikeliny tao Mampikony VONO SY HERISETRA (152) 6 avril 2020 Miisa 06 ny maty hita nitsirara teny an-dalana nandritra ny volana marsa TETO AN-DRENIVOHITRA (122) 6 avril 2020 "Aleo ampandeferina aloha ny tombontsoa manokana hiarovana ny vahoaka" GOVERNORAN’NY FARITRA SOFIA (92) 6 avril 2020 Tsy nahitana soritr’aretina coronavirus ireo olona 24 tonga avy any ivelany FARITRA SAVA (72) 6 avril 2020 Dahalo 02 sy lehilahy 02 mpividy omby halatra voasambotry ny zandary ANTSIRANANA (69) 6 avril 2020 Miitatra 15 andro ny fihibohana an-trano ADY AMIN’NY « CORONAVIRUS » (52) 6 avril 2020